Shiinaha cufnaanta sare soosaarayaasha go'yaasha foamex-ka-soo-saarka CO | Gokai
Gudiga xumbada pvc-ka ee cad-cad ayaa wada isticmaalaya wasakhda waxsoosaarka wax soo saarka, taas oo sameysa qaab dhismeedka guddiga sanduuqa-xudunta waa pluc celluar iyo labada maqaar ee kore waa PCV adag. Waa guddi khafiif ah oo balaaran oo balaaran oo balaaran oo loo adeegsaday codsiyo kaladuwan oo ay kujiraan calaamado iyo bandhig, soo bandhigyo waababyo, sawir qaadid, qaabeynta gudaha, heerkulbeegga, noocyada, qaab sameynta Marka la barbardhigo guddiga xumbada PVC celuka, xumbada PVC-wada-xajinta ayaa leh dusha sare oo dhalaalaya. Qalabka dusha sare ayaa aad uga fiican celuka, taas oo ka faa'iideysan doonta isticmaalka qaar ka mid ah codsiyada, sida miiska dushiisa, qurxinta gudaha doomaha, markabka, gaadiidka, tareenka.
Faa'iidada: Dusha sare ee xaashida balaaran ee loo yaqaan 'PVC sheet' ayaa loo isticmaali karaa daabacaadda shaashadda, rinjiyeynta, dhejinta la gooyey, dhejinta, xardho, xoqitaanka
MAADDADA TAYO SARE: Gudiga xumbada PVC wuxuu u adeegsadaa pvc sida xumbo gudaha ah, banaanka sidoo kale waa pvc veneer, sidaa darteed cufnaanta iyo adkaanta wey ka weyn tahay kana sarreysaa saxanka lagu sameeyay qalabka kale.
SAHAL IN LA ISTICMAALO:Xaashida xumbada PVC waxay leedahay dusha sare ee jilicsan iyo dhexdhexaad adag, dabacsanaan wanaagsan, waa mid aad ugu habboon in la gooyo. si fudud ayaa loo goyn karaa iyadoo loo eegayo cabirkaaga
Dhumucdiisuna 1,0-18 mm
Cufnaanta 0.45 ~ 0.90 g / cm3
Cabir 1220X2440mm (4 'X 8'); Cabbirka Custom ayaa la heli karaa
Midabka caadiga ah Caddaan
Oogada: Hufan & Adag
Moq: 200pcs / hal dhumuc
1. Miisaanka fudud, keydinta fudud iyo ka shaqeynta, dusha sare ee siman oo adag
2. Dhawaqa & kuleylka kuleylka, nuugista dhawaaqa, ma sahlana in la xoqo
3. biyuhu ma galaan, Dabka ka gubta iyo is-bakhtiiye ， U adkaysta qoyaanka
Astaamaha Been Abuurista
1. Been abuur fudud oo leh qalab caadi ah, sida garbaha, miinshaaro, dubbayaal iyo laylisyo.
2. Dusha sare oo fidsan oo lagu dabaqi karo daabacaadda, rinjiyeynta, kor u qaadista.
Isku xidhka alaabooyinka kale ee PVC ee ku dhegsan dhejiska PVC
3. Waxay ku habboon tahay qaabeynta kuleylka, foorarsiga kuleylka iyo isku laabidda howsha.
• Dharka gidaarka iyo saqafka
• Dharka dharka
• Goobta iibka
• Bandhigyo la been abuuray
• Carwada ayaa taagan
• Golaha wasiirada
• Warshadaha badda
• Shaashadaha caafimaadka
• Goobaha cuntada lagu diyaariyo
Hore: 19mm sheet PVC balaariyay
Xiga: Gudiga PVC-ga madow